Nwee akwụkwọ ahụaja dị iche iche kwa ụbọchị na Splashy | Esi m mac
Nwee akwụkwọ ahụaja dị iche iche kwa ụbọchị na Splashy
Ọ bụrụ na anyị na-etinyekarị ọtụtụ awa n'ihu Mac anyị, ọ ga-abụ na otu n'ime akụkụ ndị kachasị amasị anyị ịgbanwe ugboro ugboro bụ akwụkwọ ahụaja. Na Mac App Store anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị na-enye anyị ohere ịgbanwe akwụkwọ ahụaja na-akpaghị aka dịka onyonyo ndị anyị haziburu ma ọ bụ site na isi ihe oyiyi nke ngwa ahụ nwere. Ma ka oge na-aga ihe oyiyi na-amalite ịmeghachi onwe ha na mmetụta nke monotony mgbe ọrụ na-amalite ịbụ nsogbu. Iji dozie nsogbu a, anyị nwere ike iji ngwa Splashy mee ihe.
Ọkpụkpụ bụ ngwa enwere ike maka Windows na Linux, nke na-eji Unplash web API, otu n'ime ebe nrụọrụ weebụ ebe anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke foto nke ụdị dị iche iche ma dị mma. Splashy na-enye anyị nhọrọ nhazi dị iche iche n'etiti nke anyị na-ahụ nhọrọ iji gbanwee akwụkwọ ahụaja site n'oge ruo n'oge, ma na nkeji ọ bụla, kwa awa 6, awa iri na abụọ ma ọ bụ 12 awa. Ihe kachasị dị na ngwa ahụ bụ na ịbụ ọrụ na-ebudata ihe oyiyi na-akpaghị aka, ọ dịghị achọ ohere dị ukwuu na draịvụ ike anyị, ihe ọtụtụ ngwa na-emehie na nke ahụ nwere ike bụrụ nnukwu nsogbu na oge iji nweta ha na draịvụ ike anyị.
Site na akara ngosi egosiri na ogwe menu, anyị nwere ike ịnweta ibe weebụ ozugbo ebe onyinyo a na-ekwu okwu ya dị ka inweta nkọwa ndị ọzọ ma ọ bụ jiri aka ya gbanwee ya na ịpị na igodo igodo ahụ, anyị enweghị ike ịmasị foto niile egosiri dị ka akwụkwọ ahụaja na ndị mmepe nke ngwa a maara ya. Naanị ihe anyị na-atụghị anya na ngwa ahụ bụ inwe ike ịhọrọ isiokwu anyị chọrọ ka anyị jiri na akwụkwọ ahụ aja nke ọ na-enye anyị, mana ị gaghị enwe ihe niile, yana ihe ngwa ahụ na-enye anyị karịrị iji kpuchie nhazi ahụ. mkpa nke ọtụtụ ndị ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Nwee akwụkwọ ahụaja dị iche iche kwa ụbọchị na Splashy
Ọfọn ugbu a ọ naghị arụ ọrụ. Na weebụ ha na-ekwu ka ihichapụ ngwa dị ugbu a nakwa na ha ga-ahapụ nke ọhụrụ ...
Nke a bụ otu anyị siri tinye Mac mara mma na mgbidi